WA सूचित प्रदर्शन सूचनाहरू स्मार्टफोन एप | Washington State Department of Health
WA Notify (Washington Exposure Notifications ( वाशिंगटन एक्सपोजर सूचनाहरू ) को रूपमा मानिन्छ) एक नि: शुल्क उपकरण हो जसले स्मार्टफोनमा प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनी व्यक्तिगत जानकारी सेयर नगरिकनै COVID-19 को संसर्गमा आउन सचेत गर्न सकियोस् भनेर सचेत गर्ने काम गर्दछ। यो पूर्ण रूपले व्यक्तिगत छ र तपाईं को हुनुहुन्छ वा तपाईं कहाँ जानुहुन्छ ट्रयाक गर्न थाहा छैन।
मैले आफ्नो फोनमा कसरी WA Notify थप्ने?
आईफोनमा, सेटिंगमा Exposure Notifications सक्षम गर्नुहोस:
संसर्ग सुचनाहरुको Exposure Notifications
"Exposure Notifications" क्लिक गर्नुहोस्
युनाइटेड राज्यहरु छनोट गर्नुहोस्
वासिङ्गटन छनोट गर्नुहोस्
Google Play Store मा जानुहोस्
WA Notify एप डाउनलोड गर्नुहोस्
एन्ड्रोइड वा आईफोनमा, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस्:
यसले कसरि काम गर्दछ?
जब तपाईले WA Notiy गर्नुहुन्छ, तपाइको फोन अनियमित तरिकाले फेरबदल, नचिनेका कोडहरु तपाईको नजिकको फोनको साथमा फेरबदल गर्दछ जुन तपाईले WA Notify पनि गर्नुभयो। एपले तपाईंको बारेमा कुनै जानकारी खुलासा नगरिकन यी क्रमरहित कोडहरूको आदान-प्रदान गर्नको लागि गोपनीयता संरक्षण कम ऊर्जा ब्लुटूथ टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दछ। यदि पछिल्लो पटक नजिकै हुनुभएको कुनै अन्य WA Notify प्रयोगकर्ता सो व्यक्ति पछि COVID-19 को पोजेटिभ परीक्षण गर्यो र अरूलाई अज्ञात रुपमा सूचित गर्ने चरणहरूको पालना गर्दछ भने, तपाईंले सम्भावित संसर्ग गर्नुभएको नाम बिनाको सूचना पाउनुहुनेछ। यसले तपाईलाई चाडोनै स्याहर प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ र तपाईको वरिपरी भएका मानिसहरुमा COVID-19 फैलाउनबाट रोक्न सहयोग पुर्याउदछ।
एक एल्गोरिदमले ती घटनाहरूको पहिचान गर्नको लागि हिसाब गर्दछ जसले सम्भावित रूपमा ती मानिसहरूबाट COVID-19 प्रसारित गर्दछ जो सुरक्षित दूरमा थिए वा यति कम दूरीमा थिए कि तपाईंलाई चेतावनी दिने आवश्यकता पर्दैन। WA Notify ले तपाईंलाई यदि तपाईं सम्भावित संसर्ग भएको छ भने मात्र सचेत गर्नेछ। त्यसैले सतर्कता प्राप्त नगर्नु राम्रो समाचार हो।
WA Notify 30 भन्दा बढी भाषाहरूमा उपलब्ध छ ताकि धेरै वाशिंगटन निवासिहरू यो उपकरणलाई सकेसम्म बढी प्रयोग गर्न सकून्।
घरमा गरिएको कोभिड-19 को परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएका खण्डमा प्रमाणीकरण कोड पठाइदिन अनुरोध गर्ने तरिका
आफैले टेस्ट किट खरिद गरेर कोभिड-19 परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ देखिएका WA Notify (वासिङ्गटन नोटिफाइ) का प्रयोगकर्ताहरूले अब WA Notify मा प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गर्न सक्छन् ।
डिभाइसमार्फत प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गर्न:
WA Notify खोल्नुहोस् अनि “Share your test result to help stop the spread of COVID-19” (कोभिड-19 फैलन नदिन आफ्नो परीक्षणको नतिजा सेयर गर्नुहोस्) चयन गर्नुहोस् ।
“Continue” (जारी राख्नुहोस्) चयन गर्नुहोस् अनि “I needacode” (मलाई कोड चाहियो) चयन गर्नुहोस् ।
तपाईं जुन डिभाइसमा WA Notify चलाउनुहुन्छ उक्त डिभाइसको फोन नम्बर र तपाईंले जुन मितिमा कोभिड-19 को परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ देखिएको थियो उक्त मिति हाल्नुहोस् ।
“Send Code” (कोड पठाउनुहोस्) चयन गर्नुहोस् ।
Settings (सेटिङ) मा जानुहोस् अनि Exposure Notifications (सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको बारेमा सूचनाहरू) खोल्नुहोस् ।
“ShareaCOVID-19 Diagnosis” (आफूलाई कोभिड-19 लागेको बारेमा जानकारी सेयर गर्नुहोस्) चयन गर्नुहोस् ।
“Continue” (जारी राख्नुहोस्) चयन गर्नुहोस् अनि “Didn’t getacode? Visit WA State Dept. of Health Website.” (कोड पाउनुभएन? वासिङ्गटन राज्यको स्वास्थ्य विभागको वेबसाइटमा जानुहोस् ।) चयन गर्नुहोस् ।
“Continue” (जारी राख्नुहोस्) चयन गर्नुहोस् ।
तपाईंले एउटा पप-अप सूचनाका साथै प्रमाणीकरण लिंकसहित एउटा टेक्स्ट म्यासेज प्राप्त गर्नु हुने छ । अन्य प्रयोगकर्ताहरू सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएको हुन सक्ने बारेमा उनीहरूलाई WA Notify मार्फत नाम नखुलाइकन सूचित गर्ने चरणहरू पालना गर्न तपाईंले या त सूचनामा ट्याप गर्नु पर्छ वा टेक्स्ट म्यासेजमा भएको लिंकमा क्लिक गर्नु पर्छ । तपाईंले WA Notify मार्फत प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गरेपछि Department of Health (DOH, स्वास्थ्य विभाग) लाई तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको बारेमा जानकारी गराउन राज्यको कोभिड-19 हटलाइन 1-800-525-0127 मा फोन गर्नुहोस् अनि # थिच्नुहोस् ।
तपाईंले WA Notify मा प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गर्न सक्नुभएन भने तपाईंले राज्यको कोभिड-19 हटलाइन 1-800-525-0127 मा फोन गर्नु पर्छ अनि # थिच्नु पर्छ र हटलाइनका कर्मचारीलाई तपाईं WA Notify प्रयोगकर्ता हो भन्ने कुरा जानकारी गराउनु पर्छ । हटलाइनका कर्मचारीले तपाईंलाई एउटा प्रमाणीकरण लिंक प्रदान गर्न सक्छन् । तपाईं उक्त लिंक प्रयोग गरी तपाईंको सम्पर्कमा आएका हुन सक्ने अन्य WA Notify प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ ।
घरमा गरिएको कोभिड-19 को परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको बारेमा जानकारी गराउने तरिका
आफैले टेस्ट किट खरिद गरेर परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ देखिएका मान्छेहरूले सकेसम्म चाँडो राज्यको कोभिड-19 हटलाइन 1-800-525-0127 मा फोन गर्नु पर्छ अनि # थिच्नु पर्छ (स्पेनिस भाषाका लागि7थिच्नु पर्छ) । हटलाइन सेवा खुला रहने समय हेर्नका लागि Contact Us (हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्) पेजमा जानुहोस् । भाषासम्बन्धी सहायता उपलब्ध छ ।
कृपया ध्यान दिनुहोस्: WA Notify भनेको कोभिड-19 सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका हुन सक्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गर्ने एउटा संयन्त्र हो । यो संयन्त्र प्रयोगकर्ताहरूको परीक्षणको नतिजा प्रविष्टि गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको होइन ।
मेरो गोपनियता कसरि सुरक्षित गरिएको छ?
WA Notify Google Apple अनावरण सूचना प्रविधिमा आधारित छ, जसलाई तपाईंको गोपनीयताको सुरक्षा गर्नको लागि डिजाइन गरिएको छ। यसले कुनै पनि स्थान वा व्यक्तिगत डाटाको संकलन वा खुलासा बिना नै पृष्ठभूमिमा काम गर्दछ, र तपाईंले प्रभावकारी रूपमा को वा कहाँ काम गर्नुपर्छ थाहा पाउनु पर्दैन। मात्र सानो फुटेको ब्लुटूथको प्रयोग गरी, तपाईंको ब्याट्री प्रभावित हुँदैन।
सहभागिता पूर्ण स्वैच्छिक हो। प्रयोगकर्ताहरु कुनैपनि समयमा opt in वा out हुन् सक्छन। कसरी प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई सुरक्षा गरिएको छ सो को बारेमा थप जानकारीको लागि, WA Exposure Notifications गोपनीयता नीति हेर्नुहोस्।
सूचनाहरू कस्तो देखिन्छन्?
त्यहाँ तपाईंले प्राप्त गर्न सक्नुहुने दुई प्रकारका सूचनाहरू छन्। पोजिटिभ परीक्षण भएका व्यक्तिहरूले एक प्रमाणीकरण लिङ्क पाठ सन्देश र/वा पप-अप सूचना प्राप्त गर्ने छन्। संसर्गमा आएका WA Notify प्रयोगकर्ताहरूले एक एक्सपोजरको सूचना प्राप्त गर्नेछ। यी सूचनाहरू र तिनीहरू कस्तो देखिन्छसो को बारेमा थप सिक्नुहोस्।
यसले कसरी सहयोग गर्नेछ?
हालैको University of Washington (अंग्रेजी मात्र) ले जति धेरै मानिसहरू एक्सपोजर सूचनाको प्रयोग गर्दछन् त्यति नै धेरै लाभ प्राप्त गर्दछन् भनेर पत्ता लगायो। नतिजाहरूले देखायो कि WA Notify ले अनुमानित 40-115 जीवनको ज्यान जोगायो र पहिलो चार महिनाको अवधिमा यो प्रयोगमा हुँदा सम्भवत: करीब 5,500 COVID-19 केसहरूलाई सुरक्षा गरियो। डाटा मोडेलहरूले देखाउँछ कि WA Notify को प्रयोग गरिरहेका मानिसहरूको सानो संख्या पनि COVID-19 संक्रमण र मृत्युलाई कम गर्न सक्छ, WA Notify COVID-19 को विस्तार हुनबाट रोक्ने एकदम राम्रो उपकरण छ भनी प्रमाणित गर्दछ।
WA Notify (WA सूचित गर्नुहोस्) को बारेमा प्रचार गर्न मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ?
विशेष सोशल मिडिया सन्देश, पोस्टरहरू, नमुमा रेडियो र टिभी विज्ञापनहरू र अन्य आदि कुराहरूलाई हाम्रो WA Notify टूलकिट मा हेर्नुहोस्।
अन्य बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
Washington State Department of Health (DOH, वाशिंगटन राज्य स्वास्थ्य विभाग) बाट एक सूचना र/वा टेक्स्ट पाएँ। किन?
DOH ले सबैलाई एक टेक्स्ट सब्देश र/वा पप-अप सूचना पठाउँछ जो हालै COVID-19 को पोजेटिभ परीक्षण भए त्यसैले WA Notify प्रयोगकर्ताहरूले सम्भाव्य जोखिमको बारे अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई छिटो र अज्ञात रूपमा सतर्क गर्न सक्छ। यी सूचनाहरू र तिनीहरू कस्तो देखिन्छसो को बारेमा थप सिक्नुहोस्।
यदि तपाईंले दुबै पाउनु हुन्छ भने, तपाईंले मात्र सूचना ट्याप गर्न वा टेक्स्ट सन्देशको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र सम्भावित संसर्गको अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई अज्ञात रूपमा सचेत गर्नको लागि WA Notify मा दिइएका चरणहरूको पालना गर्नुहोस्।
यदि मैले खोप लगाएको छु भने के मैले WA Notify गर्नुपर्छ?
गर्छ। COVID-19 बिरुद्ध पूर्ण रुपमा खोप लगाए पछि पनि, तपाईंले अझै पनी सामान्य महामारीसम्बन्धी सावधानीहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ। खोपहरू स्वयं आफूलाई बचाउने एक प्रभावकारी तरीका हो, तर अझै पनि तपाईं संक्रमित हुन सक्नुहुने वा खोप नलगाएका अरुलाई संक्रमित गर्न सक्नुहुने एउटा सानो जोखिम छ।
मैले मेरो WA Notify डाटा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा योगदान पुर्याउने बारेमा सूचना प्राप्त गरें । किन?
Washington State Department of Health (DOH) ले उपकरणमा आवश्यक कुनै सुधार गर्नको लागि WA Notify ले कति राम्रोसँग काम गरिरहेको छ भनेर जान्न चाहन्छ । यदि तपाईं आफ्नो WA Notify डाटा साझा गर्न सहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंको गोपनीयता अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी संकलन वा साझा गरिएको छैन र तपाईंलाई पहिचान गर्ने कुनै पनि तरिका छैन । यो डाटामा DOH ले मात्र राज्य स्तरमा पहुँच गर्न सक्छ ।
यदि WA Notify प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो डाटा साझा गर्न सहमत भएमा, के संकलन गरिन्छ?
यदि तपाईं आफ्नो डाटा साझा गर्न सहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंको गोपनीयता अझै पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी संकलन वा साझा गरिएको छैन र तपाईंलाई पहिचान गर्ने कुनै पनि तरिका छैन । Washington State Department of Health ले मात्र यो डाटा राज्य स्तरमा हेर्न सक्छ, जसमा समावेश हुनेछन् :
WA Notify बाट आफ्नो डाटा साझा गर्न सहमत हुने मानिसहरूको संख्या । यसले हामीलाई हाम्रो नमूना प्रतिनिधि कस्तो छ भनेर थाहा पाउन मद्दत गर्छ ।
WA Notify प्रयोगकर्ताहरूद्वारा प्राप्त संसर्ग सूचनाहरू को संख्या । यसले हामीलाई COVID-19 प्रसारको प्रवृत्ति हेर्न सहयोग गर्छ ।
संसर्गको सूचनामा क्लिक गर्ने व्यक्तिको संख्या । यसले हामीलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सिफारिसहरू विचार गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूको अन्वेषण गर्न मद्दत गर्छ ।
COVID-19 जाँचमा पोजिटिभ हुने व्यक्तिको नजिकमा, तर सूचित संसर्गको लागि पर्याप्त नजिक वा लामो समयसम्म संसर्गमा नरहेका व्यक्तिहरूको संख्या । यसले हामीलाई WA Notify मा संसर्ग निर्धारण गर्ने अल्गोरिदम समायोजन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर विचार गर्न मद्दत गर्छ ।
मैले मेरो iPhone मा WA Notify सक्षम गर्दा, के मैले "Availability Alerts (उपलब्धता अलर्टहरू)" टगल अन वा अफ गर्नुपर्छ?
अफ गर्नु ठीक छ। यद्यपि यदि तपाईं धेरै समयको लागि वाशिंगटन राज्य बाहिर यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईं यसलाई अन गर्न सिफारिस गरिन्छ। उपलब्धता अलर्टहरू अन हुँदा, तपाईंले WA Notify बाहेक नोटिफिकेसन प्रविधिसँग कुनै स्थानको लागि यात्रा गर्दा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । iPhone प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न क्षेत्रहरू थप्न सक्छन् तर एक पटकमा एउटा मात्र सक्रिय क्षेत्र तोक्न सक्नेछन् । तपाईंले नयाँ क्षेत्र सक्रिय गर्नको लागि पुरानो हटाउनु पर्दैन । एन्ड्रोइडको प्रयोगकर्ताहरूले एक्सपोजरको सूचना एप्सलाई धेरै राज्यहरूबाट WA Notify झैँ इन्सटल गर्न सक्छन् तर WA Notify सँग मिल्ने प्रविधिको प्रयोग गर्ने एप मात्रलाई एक समयमा डिजाइन गरिएको छ।
के मैले WA Notify प्रयोगमा प्रवेश गर्नपर्छ?
गर्छ। WA Notify नि:शुल्क र स्वेच्छिक छ। तपाईंले कुनै पनि समयमा बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। सामान्य रूपमा फिचरलाई बन्द गर्नुहोस् वा एप मेटाउनुहोस्। सबै अज्ञात कोडहरू जुन फोनले अन्य नजिकका प्रयोगकर्ताहरूबाट भण्डारण गरेको थियो त्यो मेटिने छ र पुन: प्राप्त गर्न सकिने छैन।
के WA Notify एक कन्ट्याक ट्रेसिंग एप हो?
होइन। WA Notify ले ट्रेस गर्दैन वा तपाईं कहिल्यै नजिकै हुनु भएको मान्छेको बारेमा जानकारी ट्रेस गर्दैन, त्यसैले यसले "कन्ट्याक ट्रेसिंग" गर्दैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगले COVID-19 को पोजेटिभ परीक्षण गरेको व्यक्तिको पहिचान हुन सक्छ। एपले कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन वा आदान प्रदान गर्दैन, त्यसैले यो कसैको लागि पनि तपाईंको कोसँग सम्पर्कमा हुनु भएको थाहा पाउन सम्भव हुँदैन।
एक्सपोजर भनेको के हो”?
संसर्ग तब हुन्छ जब तपाईंले अर्को WA Notify प्रयोगकर्ताको नजिकमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खर्च गर्नुहुन्छ जसले पछि गएर COVID-19 को लागि पोजेटिभ परीक्षण गर्दछ। यसले COVID-19 को भौतिक दूरी र प्रसारको बारेमा हालको CDC (रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू) बाट निर्देशन (अंग्रेजी मात्र) पालना गर्दछ। एक्सपोजरको निर्धारण गर्न, WA Notify CDC ले नजिकको सम्पर्कको परिभाषा सहितको एल्गोरिदमको प्रयोग गर्दछ – 15 मिनेट वा संकामकको समयमा थप समयको लागि करीब6फीट (2 मिटर) – र सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारिहरूद्वारा समायोजित गर्न सकिन्छ।
यदि WA Notify ले मलाई म संसर्गित हुन सक्छु भन्छ भने के हुन्छ?
पाउने छैनन्। WA Notify तपाईंको जानकारी अन्य कसैसँग पनि सेयर गर्दैन। जब कसैले सम्भावित संसर्गको बारेमा सूचना प्राप्त गर्दछ भने, केवल उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि पछिल्लो 14 दिनमा उनीहरूको नजिकको कोहीले COVID-19 को पोजेटिभ परीक्षण गर्यो भनेर। उनीहरूले व्यक्ति को थियो वा कहाँ संसर्ग भयो थाहा हुँदैन।
यदि म COVID-19 को पोजेटिभको परीक्षण भएँ भने के मानिसहरूले थाहा पाउने छन्?
के मैले WA Notify को लागि शुल्क तिर्नु पर्दछ?
पर्दैन। WA Notify नि:शुल्क छ।
कसरी WA Notify ले वाशिंगटन राज्यलाई सहायता गर्नेछ?
यदि म राज्य बाहिर जान्छु भने के WA Notify ले काम गर्दछ?
गर्छ। यदि तपाईंले एपको साथ राज्यमा यात्रा गर्नुहुन्छ जसले Apple/Google प्रविधिको प्रयोग गर्दछ भने, तपाईंको फोनले त्यस राज्यमा प्रयोगकर्ताहरूको साथ अनियमित कोडहरूको आदानप्रदान गर्न जारी राख्नेछ। तपाइँको अनुप्रयोग सेटिंग्स मा केहि परिवर्तन गर्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन । यदि तपाईं विस्तारित अवधिको लागि वाशिंगटन बाट बाहिर जानुभयो भने, तपाईंले स्थानीय समर्थन र सतर्कताहरू प्राप्त गर्नको लागि तपाईंले नयाँ राज्यमा विकल्पहरूको समीक्षा गर्नु पर्दछ।
किन हामीलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग र WA Notify दुबै चाहिन्छ?
कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग दसकौँ देखि प्रभावकारी सार्वजनिक स्वास्थ्यको मध्यस्थकर्ता भएको छ। WA Notify ले यो कामलाई अज्ञत रूपमा सहायता गर्दछ । यहाँ एउटा उदाहरण छ: यदि तपाईं COVID-19 को पोजेटिभ परीक्षण गर्नुहुन्छ भने, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई फोन गरी तपाईंलाई तपाईंको हालको नजिकको सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई सेयर गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले एक अपरिचित व्यक्तिको नाम लिन सक्नुहुन्न जोसँग तपाईं बसमा नजिकै बस्नुभयो। यदि तपाईं दुबै WA Notify को प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, बसबाट अपरिचित व्यक्तिले अज्ञात सम्भावित जोखिमको बारेमा सतर्क हुन सक्छ र आफ्ना साथीहरू र परिवारमा COVID-19 को विस्तार रोक्न कदम चाल्दछ। हात धुने र मास्क लगाउने प्रत्येक COVID-19 को विस्तारलाई रोक्न मद्दत गरे झैँ, त्यसरी नै तिनीहरू निकै प्रभावकारी हुन्छन्।
अन्य मानिसहरूलाई सूचित गर्न WA Notify के कति लामो समय लिन्छ?
COVID-पोजेटिभ प्रयोगकर्ताले WA Notify का चरणहरू अज्ञात रुपमा अन्य WA Notify प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराउँदा COVID-19 को जोखिममा रहेका अन्य प्रयोगकर्ताहरूले 24 घन्टा भित्र एउटा सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
के WA Notify बाट अधिक सतर्कताहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ?
यदि म COVID पोजेटिभ भएँ भने मैले कसरी WA Notify लाई बताउने?
तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखियो भने Washington State Department of Health (DOH, वासिङ्गटन राज्यको स्वास्थ्य विभाग) वा स्थानीय स्वास्थ्य निकायका कोही कर्मचारीले तपाईंलाई सो सम्बन्धमा सम्पर्क गर्दा उहाँले तपाईं WA Notify चलाउनुहुन्छ कि चलाउनुहुन्न भनेर सोध्नु हुने छ । तपाईं WA Notify चलाउनुहुन्छ भने उहाँले तपाईंलाई प्रमाणीकरण लिंक र/वा सूचना पठाउनु हुने छ र तपाईंको परीक्षणको नतिजा WA Notify मा प्रविष्टि गर्न मद्दत गर्नु हुने छ । उक्त लिंक वा सूचना तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीसँग जोडिएको हुँदैन । तपाईंले तोकिएका चरणहरू पालना गर्नुभयो भने यो एपले सम्भावित सङ्क्रमणका बारेमा ककसलाई सूचित गर्छ भन्ने कुरा DOH ले थाहा पाउन सक्दैन । सम्भावित सङ्क्रमणसम्बन्धी सूचनामा तपाईंको कुनै पनि जानकारी समावेश गरिँदैन । जति धेरै मान्छेहरूले WA Notify मा नाम नखुलाइकन आफ्नो परीक्षणको नतिजा प्रमाणीकरण गर्छन् हामी कोभिड-19 फैलन नदिन त्यति नै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ ।
तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको छ र तपाईंले अझै पनि WA Notify मा नाम नखुलाइकन आफ्नो परीक्षणको नतिजा प्रमाणीकरण गर्न जरुरी छ भने WA Notify का अन्य प्रयोगकर्तालाई सम्भावित सङ्क्रमणका बारेमा नाम नखुलाइकन सूचित गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गर्ने तरिका थाहा पाउन यो पेजको “How to requestaverification code for positive at-home COVID-19 test results (घरमा गरिएको कोभिड-19 को परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएका खण्डमा प्रमाणीकरण कोड पठाइदिन अनुरोध गर्ने तरिका)” नामक खण्ड पढ्नुहोस् ।
तपाईंले WA Notify मार्फत प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गरेपछि DOH लाई तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको बारेमा जानकारी गराउन राज्यको कोभिड-19 हटलाइन 1-800-525-0127 मा फोन गर्नुहोस् अनि # थिच्नुहोस् ।
के मैले आफ्नो फोनमा WA Notify थपे पछि गर्नु पर्ने केही कुरा छ?
निम्न अवस्थामा मात्र तपाईंले अतिरिक्त कदम चाल्न जरुरी हुन्छ:
तपाईंले कोभिड-19 को परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ देखिएमा, वा
तपाईं सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको हुन सक्छ भन्ने सूचना प्राप्त भएमा ।
तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखियो भने Washington State Department of Health (DOH) वा स्थानीय स्वास्थ्य निकायका कोही कर्मचारीले तपाईंलाई सो सम्बन्धमा सम्पर्क गर्दा उहाँले तपाईं WA Notify चलाउनुहुन्छ कि चलाउनुहुन्न भनेर सोध्नु हुने छ । तपाईं WA Notify चलाउनुहुन्छ भने उहाँले तपाईंलाई प्रमाणीकरण लिंक र/वा सूचना पठाउनु हुने छ र तपाईंको परीक्षणको नतिजा WA Notify मा प्रविष्टि गर्न मद्दत गर्नु हुने छ । उक्त लिंक वा सूचना तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीसँग जोडिएको हुँदैन । यो एपले सम्भावित सङ्क्रमणका बारेमा ककसलाई सूचित गर्छ भन्ने कुरा DOH ले थाहा पाउन सक्दैन । सम्भावित सङ्क्रमणसम्बन्धी सूचनामा तपाईंको कुनै पनि जानकारी समावेश गरिँदैन । जति धेरै मान्छेहरूले WA Notify मा नाम नखुलाइकन आफ्नो परीक्षणको नतिजा प्रमाणीकरण गर्छन् हामी कोभिड-19 को फैलन नदिन त्यति नै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छौँ ।
तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको छ र तपाईंलाई प्रमाणीकरण कोड चाहिन्छ भने WA Notify का अन्य प्रयोगकर्तालाई सम्भावित सङ्क्रमणका बारेमा नाम नखुलाइकन सूचित गर्ने प्रयोजनका लागि प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गर्ने तरिका थाहा पाउन यो पेजको “How to requestaverification code for positive at-home COVID-19 test results (घरमा गरिएको कोभिड-19 को परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएका खण्डमा प्रमाणीकरण कोड पठाइदिन अनुरोध गर्ने तरिका)” नामक खण्ड पढ्नुहोस् ।
तपाईंले WA Notify, मार्फत प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गरेपछि DOH लाई तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको बारेमा जानकारी गराउन राज्यको कोभिड-19 हटलाइन 1-800-525-0127, मा फोन गर्नुहोस् अनि # थिच्नुहोस् ।
यदि WA Notify तपाईंको संसर्ग भयो भनेर पत्ता लगाउँछ भने, तपाईंको फोनमा एउटा सूचनाले तपाईंलाई अब यस पछि के गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा जानकारीको साथ वेबसाइटमा निर्देशित गर्नेछ। यसमा कसरी र कहाँ परीक्षण गर्ने, आफैँलाई र तपाईंको नजिकको व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने भने बारेमा जानकारी, र तपाईंका प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि साधनहरू समावेश गर्दछ। यो पढ्न र वेबसाइटमा सावधानिपूर्वक निर्देशनहरू पालना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। अधिसूचना कसले तपाइँ वा कहाँ उजागर गरेको हुन सक्छ भन्ने बारे जानकारी समावेश गर्दैन। यो पूर्ण अज्ञात छ।
के WA Notify ले मेरो ब्याट्री सकाउँछ र धेरै डाटाको प्रयोग गर्दछ?
होइन। यसले ब्लुटूथ कम ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग गरेर तपाईंको डाटा र ब्याट्री जीवनमा न्यूनतम प्रभाव गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो।
के मैले काम गर्न WA Notify को लागि ब्लुटूथ अन गर्नुपर्छ?
गर्छ। WA Notify ले ब्लुटूथ कम ऊर्जाको प्रयोग गर्दछ, त्यसैले ब्लुटूथ सधैँ सिस्टमको लागि अन्य प्रयोगकर्ताहरू नजिकै पत्ता लगाउन सक्रिय हुनु पर्छ।
के मैले यसले काम गर्नको लागि मेरो फोनमा WA Notify खोल्नु पर्दछ?
पर्दैन। WA Notify ले पृष्ठभूमीमा काम गर्नेछ।
के WA Notify पुरानो स्मार्टफोनमा समर्थित छ?
iPhone प्रयोगकर्ताहरूले WA Notify प्रयोग गर्न सक्नेछन् यदि तपाईंको अपरेटिंग प्रणाली निम्न छ भने :
iOS संस्करण 13.7 वा पछिल्लो (iPhone 6s, 6s Plus, SE वा नयाँको लागि)
iOS संस्करण 12.5 (iPhone 6,6plus 5s)
यदि तपाईंको एन्ड्रोइड स्मार्टफोनले ब्लुटुथ कम ऊर्जा र एन्ड्रोइड संस्करण6(API 23) वा माथिको समर्थन गरेमा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको WA Notify प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
के म WA Notify को प्रयोग गर्न 18 वर्षको हुनु पर्दछ?
पर्दैन। WA Notify लाई तपाईंको उमेर थाहा छैन वा जाँच गर्दैन।
यदि मैले कसैसँग फोन सेयर गरेँ भने के यो प्रविधिले काम गर्नेछ?
WA Notify ले सम्भाव्य जोखिमको समयमा कसले फोनको प्रयोग गरिरहेको थियो बताउन सक्दैन। यदि तपाईंले फोन साझा गर्नुभयो भने, फोन प्रयोग गर्ने सबैले सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशनहरूको पालना गर्नु पर्दछ, यदि WA Notify COVID-19 लाई सम्भावित संसर्ग देखाउँछ भने।
के WA Notify ले आईप्याड वा स्मार्ट घडीहरू जस्ता डिभाइसहरूमा काम गर्दछ?
गर्दैन। जोखिम सूचना रूपरेखा विशेष रूपमा स्मार्ट फोनहरूको लागि डिजाइन गरिएको थियो जुन आईप्याड वा ट्याबलेटहरूमा समर्थित थिएन।
स्मार्ट फोन नहुने मानिसहरूले यो प्रविधिमा पहुँच प्राप्त गर्नको लागि वाशिंगटन राज्य के गर्दैछ?
WA Notify COVID-19 को प्रसार रोक्न मद्दत गर्ने एक मात्र उपकरण होइन। प्रत्येक वाशिंगटन निवासीको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग र अन्य प्रयासका लाभ, चाहे उनीहरूसँग स्मार्टफोन नभएता पनि। खोपहरू COVID-19 को विस्तार रोक्ने सबैभन्दा राम्रो तरीका हुन्, र मास्क लगाउनु, शारीरिक रुपमा टाढा रहनु, र जमघटको मात्रा सीमित गर्नु अन्य उपायहरू हुन् जसले सबैले COVID-19 को विस्तार रोक्न मद्दत गर्न सक्छन्।
संघीय सरकारको Lifeline program (लाइफलाइन कार्यक्रम) ले योग्य व्यक्तिहरूलाई मासिक फोन बिल क्रेडिट प्रदान गर्दछ। केही सहभागी वायरलेस सेवा प्रदायकहरू पनि एक नि:शुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध गराउन सक्छन्। को योग्य छ, कसरी लागू गर्ने र वायरलेस प्रदायकहरूमा सहभागी हुने कार्यक्रमको बारेमा थप जान्नुहोस् (अंग्रेजी मात्र)।
COVID-19 को खोप लिनु प्रसार रोक्ने सबैभन्दा राम्रो तरीका हो भनी सम्झिनुहोस्।
यो किन WA Notify ले धेरै ब्याट्री समयको प्रयोग गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ?
वास्तवमा, यो सायद त्यस्तो होइन । तपाईंको डिभाइसमा ब्याट्री प्रयोगले WA Notify सहित एपहरूले प्रत्येक दिन प्रयोग गर्ने ब्याट्रीको प्रतिशत देखाउँछ । धेरैजसो एपहरू राती चल्दैनन् । WA Notify पनि चल्दैन, तर यसले तपाईंलाई कुनै सम्भावित संसर्गहरूको बारेमा सचेत गर्नको लागि पोजिटिभ प्रयोगकर्तासँग मेल खाने कुराको लागि अनियमित कोडहरूको जाँच गर्छ । त्यसैले, उदाहरणको लागि, तपाईं सुतेको बेलामा कुनै अन्य एपहरू चालु नहुँदा, WA Notify ले त्यो समयमा प्रयोग भएको ब्याट्रीको उच्च प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसको अर्थ WA Notify ले धेरै ब्याट्री प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने होइन - ब्याट्रीको थोरै मात्राको उच्च प्रतिशत मात्र प्रयोग गरेको हो ।
वाशिंगटनले 30 वटा भन्दा बढी भाषाहरूमा WA Notify जारी गर्यो, त्यसैले मैले यसलाई Google Play store मा किन अङ्ग्रेजी र स्पेनिशमा मात्र हेर्ने?
WA Notify प्रयोगकर्ताको फोनमा सेट गरिएको पूर्वनिर्धारित भाषाको आधारमा संचालित हुन्छ । WA Notify को एउटा मात्र संस्करण छ, तर कुनै पप-अप-एक एक्सपोजर सूचना, उदाहरणको लागि- वाशिंगटन राज्य लागू 30 भन्दा बढी भाषाहरूका लागि प्रयोगकर्ताले रूचाइएको भाषामा देखिनेछ।
मैले एक सूचना र/वा टेक्स्ट प्राप्त गरेँ, तर परीक्षण गरेको व्यक्ति परिवार वा घरको सदस्य थियो। मैले के गर्नुपर्छ?
परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएका WA Notify प्रयोगकर्ताले आफूसँग सम्पर्कमा आएको हुन सक्ने अन्य व्यक्तिलाई नाम नखुलाइकन सूचित गर्ने चरणहरू पालना गर्नु पर्छ । त्यसकारण तपाईंले आफूसँग सरोकार नराख्ने सबै म्यासेज वा सूचना बेवास्ता गर्नु पर्छ ।
तपाईंको परिवार वा तपाईंको परिवारको कोही सदस्यले WA Notify प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको छ र अझै पनि WA Notify मा उहाँको परीक्षणको नतिजा प्रमाणीकरण गर्न जरुरी छ भने उहाँहरूले यो पेजमा रहेको “How to requestaverification code for positive at-home COVID-19 test results (घरमा गरिएको कोभिड-19 को परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएका खण्डमा प्रमाणीकरण कोड पठाइदिन अनुरोध गर्ने तरिका)” नामक खण्डमा दिइएका चरणहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ ।
मैले कति समयसम्म सूचनामा ट्याप गर्नुपर्छ वा प्रमाणीकरण लिङ्कलाई सक्रिय गर्नुपर्छ?
तपाईंले सूचना वा टेक्स्ट म्यासेज प्राप्त गरेपछि WA Notify मार्फत अरूलाई सूचित गर्ने चरणहरू पालना गर्न तपाईंसँग 24 घण्टाको समय हुन्छ । तपाईंले उक्त समयभित्र सूचनामा ट्याप गर्न वा प्रमाणीकरण लिंकमा क्लिक गर्न सक्नुभएन भने तपाईं यो पेजमा रहेको “How to requestaverification code for positive at-home COVID-19 test results (घरमा गरिएको कोभिड-19 को परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएका खण्डमा प्रमाणीकरण कोड पठाइदिन अनुरोध गर्ने तरिका)” नामक खण्डमा दिइएका चरणहरू पालना गरेर WA Notify मार्फत प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले WA Notify मार्फत प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गरेपछि DOH लाई तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको बारेमा जानकारी गराउन राज्यको कोभिड-19 हटलाइन 1-800-525-0127 मा फोन गर्नुहोस् अनि # थिच्नुहोस् । साथै, DOH वा स्थानीय स्वास्थ्य निकायका कोही कर्मचारीले तपाईंलाई कोभिड-19 को परीक्षणको नतिजाका बारेमा सोध्नका लागि सम्पर्क गर्दा तपाईं उनीहरूसँग लिंक माग्न सक्नुहुन्छ ।
सिङ्गटनले यो समाधान किन छनोट गर्यो?
Apple/Google समाधानको समीक्षा गर्नको लागि वाशिङ्गटनले सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रता विज्ञहरू र थुप्रै समुदायका सदस्यहरूलाई समावेश गरेर एक राज्य निरीक्षण समूह गठन गर्‍यो। समुहले प्लेटफर्मको प्रमाणित बिस्वसनियता, मजबुद तथ्यांक सुरक्षा र अन्य राज्यहरुद्वारा प्रयोगको आधारमा लिन सिफारिस गर्यो।
म कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको मिति WA Notify मा कहाँनेर देखाइएको हुन्छ ?
Settings (सेटिङ) मा जानुहोस्
Exposure Notifications (सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको बारेमा सूचनाहरू) चयन गर्नुहोस् वा सर्च बार (Search Bar) मा Exposure Notifications (सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको बारेमा सूचनाहरू) हाल्नुहोस्
“You may have been exposed to COVID-19” (तपाईं कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको हुन सक्छ) अन्तर्गत तपाईं सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको हुन सक्ने मिति देखाइको हुन्छ
WA Notify एप खोल्नुहोस्
“Possible exposure reported” (सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको हुन सक्ने बारेमा जानकारी प्राप्त भएको छ) अन्तर्गत See Details (विवरणहरू हेर्नुहोस्) चयन गर्नुहोस्
“Possible Exposure Date” (सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको हुन सक्ने मिति) अन्तर्गत तपाईं सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको हुन सक्ने मिति देखाइएको हुन्छ